कसरी एउटा वेब पृष्ठ बनाउने: तपाईंसँग बिभिन्न विकल्पहरू छन् क्रिएटिव अनलाइन
मसँग वेब पृष्ठ सिर्जना गर्न विकल्पहरू के छन्
हाल The०% सबै वेबसाइटहरू जुन सिर्जना गरिएका छन् वर्डप्रेससँगै छन्, एक CMS (सामग्री प्रबन्धन प्रणाली) जुन यसको ठूलो बहुमुखी प्रतिभा र उत्कृष्ट शिक्षण वक्रको कारणले गर्दा धेरै विकासकर्ताहरू र गैर-द्वारा चुनिएका मुख्यको रूपमा राखिएको छ।
तर हामीसँग सिर्जना गर्न WordPress छैन कुनै समय मा एक वेब पृष्ठ, तर त्यहाँ ब्ल्गर, Wix, स्क्वायरस्पेस, Weebly, शपिफाई वा १ र १ Ionos को रूपमा धेरै विकल्पहरू छन्। तिनीहरू बीच ठूलो भिन्नता भनेको उनीहरूले प्रदान गर्ने समाधान र तपाईंले गर्न सक्ने सबै कुरा र यसलाई प्राप्त गर्न आवश्यक समय र प्रयास हो। हामी अधिक जटिल विकल्पहरूमा जानको लागि सरलसँग सुरू गर्नेछौं।
3 1 र 1 Ionos
9 ० बाट वेब सिर्जना गर्नुहोस्
10 अन्तिम आश्चर्य: Github को साथ तपाइँको वेबसाइट सिर्जना गर्नुहोस्
विक्स हाल बनेको छ को लागी एक उत्तम विकल्प को लागी सजीलै वेब पृष्ठ बनाउनुहोस् केही मिनेटमा। यो एक अनलाइन प्लेटफर्म हो जसले तपाईंलाई प्रोग्रामिंगको प्रयास बचाउँदछ, केहि सीएसएस सिक्न वा HTML लाई केही आवश्यकताहरूको लागि जान्न।
तपाईंले केवल केही छनौट गर्नुपर्नेछ टेम्पलेट्स (उच्च गुणवत्ता खैर, तपाइँको आफ्नै डोमेन लिन छान्नुहोस् र ड्र्यागमा जानुहोस् र केही मिनेटको मामलामा आधारभूत वेबसाइट सेटअप गर्न ड्रप गर्नुहोस्। विक्सको अर्को सबैभन्दा ठूलो सद्गुण यो हो कि यो मोबाइलका लागि अप्टिमाइज गरिएको छ, त्यसैले तपाईसँग सबै चीजहरू बेस टेम्पलेटको साथ हुन्छ।
विकिप मात्र आउँदैछ आधारभूत पृष्ठहरूको लागि महान प्रकार अवतरण पृष्ठ वा ती हुन् जसले हाम्रो सेवाहरू देखाउँछन्, तर यदि हामी पहिले नै केहि जटिल कुरा चाहान्छौं, जस्तै एक इकमर्स सिर्जना गर्ने हो वा आरक्षण गर्ने उद्देश्य राखिएको हो र त्यसपछि शारीरिक खरीदहरू गर्नुपर्दा हामीले अर्को तरिका खोज्नुपर्नेछ।
यदि हामी केवल चाहन्छौं भने हामीसँग यो एकदम सरल छ एक ब्लग निर्माण, किनकि ब्लगरले केही मिनेटमा ब्लग लिनको लागि अनुमति दिन्छ। अवश्य पनि, यो गुगलको सर्वरमा होस्ट हुनेछ र प्लेटफर्मको नाम यूआरएलमा देखा पर्नेछ।
अझै, यो ती व्यक्तिहरूका लागि एक उत्तम समाधान हो त्यो एक पैसा खर्च गर्न चाहँदैन, मिनेटमा ब्लग प्रकाशित गर्न चाहनुहुन्छ र टेम्पलेट्स र केहि आधारभूतहरूको साथ थप सुविधाहरू थप्न सक्नुहुन्छ। ब्लगरको साथ सुपर कूल चीज बनाउन कोसिस नगर्नुहोस्, यदी तपाईले गुणस्तरीय सामग्री प्रस्ताव गर्नुपर्‍यो भने, यो धेरै प्रयोगकर्ताहरु सम्म पुग्ने उत्तम तरिका भन्दा बढी हो।
1 र 1 Ionos
वेब पृष्ठ बनाउनको लागि अर्को विकल्प, यद्यपि यो नि: शुल्क छैन। तर यसले हामीलाई यसको टेम्प्लेटहरूको लागि धन्यवाद, हाम्रो व्यवसाय मापन गर्न अनुमति दिँदछ, यद्यपि तिनीहरू विक्सको जत्तिकै विकसित छैनन्।
१ र १ Ionos को साथ वेबसाइट निर्माण गर्न सजिलो छ WordPress भन्दा भन्दाविशेष गरी यदि हामीसँग एक सानो व्यापार छ कि यसको साइट नेटवर्कको नेटवर्कमा हुनु आवश्यक छ र हामीसँग प्रोग्रामिंगको बारेमा कुनै विचार छैन वा हामी कहिले WordPress जस्तो CMS मार्फत गएको छैनौं।
यो समाधान छ तपाइँको वेबसाइट निर्माण गर्न तीन भुक्तान योजनाहरुजस्तै, एक ecommerce मा केन्द्रित। हामीले भनेझैं, यदि तपाईंले उत्पादनहरूको सानो भण्डार बेच्नुपर्‍यो भने, यो तपाईंलाई चाखलाग्दो विकल्प हुन सक्छ यदि तपाईंलाई जटिल केहि पनि आवश्यक भएन भने।
Weebly अर्को हो सानो व्यवसायको लागि ठूलो सम्झौता र त्यो SEO मुद्दाको राम्रो ख्याल राखेर विशेषता हो। तपाईंले खोज इञ्जिन स्थितिलाई ठूलो महत्त्व दिनुपर्दछ, किनकि यदि तपाईंको वेबसाइट खोजीबाट प्रयोगकर्ता इनपुटमा निर्भर गर्दछ, जबसम्म तपाईंसँग तपाईंको साइट एसईओको लागि अनुकूलित छैन, तपाईंसँग धेरै गाह्रो हुनेछ, यदि असम्भव छैन भने।
Weebly पनि यसको द्वारा विशेषता हो प्रयोग को सजिलो कि ड्र्याग प्रकार्य को लागी धन्यवाद र ड्रप गर्नुहोस् यसले प्रस्ताव राख्छ। अवश्य पनि, तपाइँसँग भएका वेबसाइटहरू पुन: भण्डारण गर्न सक्षम हुनुको बारे बिर्सनुहोस् र आशा गरेभन्दा थोरै भुक्तानी गर्न तयारी गर्नुहोस्, विशेष गरी यदि तपाइँ नि: शुल्क योजनाबाट जानुहुन्छ, जुन यसमा छ। योजनाहरू month to देखि $aमा एक महिना को सीमा।
न त यसको टेम्प्लेटको अभाव छयद्यपि यो स्क्वायरस्पेस र Wix को भन्दा टाढा छ। अवश्य पनि, तपाइँ कोड मामिलाहरू तपाइँको वेबसाइटमा विशेष टच दिनको लागि प्रविष्ट गर्न सक्नुहुन्छ।
शिपिफाई अब भएको छ हाम्रो व्यवसाय चलाउन को लागी एक धेरै सहज प्लेटफार्महरु सबै प्रकारका उत्पादनहरू इन्टरनेटमा बेच्दै। यो WordPress मा एक ecommerce स्थापना जत्तिकै जटिल छैन, जहाँ हामीलाई Woocommerce जस्तै प्लगइनहरू आवश्यक हुनेछ, तर यो केहि पक्षहरूमा सीमित गर्न सकिन्छ; यदि हामीले SEO (खोज इञ्जिन अप्टिमाइजेसन) नराख्ने हो भने, निश्चित रूपमा वर्डप्रेस एक उत्तम विकल्प हो।
सबैले भने, शिपिफाई अहिले नै छ सब भन्दा मनपर्ने ईकमर्स को एक र धेरै व्यवसायहरू द्वारा प्रयोग गरिएको। यो एक शानदार इन्भेन्टरी प्रणालीको विशेषता हो, ईकमर्सको लागि महत्त्वपूर्ण चीज जुन यसले सयौं वा हजारौं उत्पादनहरू ह्यान्डल गर्नुपर्दछ। आज शिपिफाई दुनिया भर मा 600.000 भन्दा बढि सक्रिय स्टोरहरु छन्।
यसको ठूलो फाइदा यो हो कि सबै प्राविधिक पक्ष प्लेटफर्ममा छोडिएका छन् र ताकि तपाइँ व्यावहारिक रूपमा तपाइँको स्टोर को आयोजन मा ध्यान केन्द्रित गर्न सक्नुहुन्छ, तपाइँका उत्पादनहरू, हुकहरू सिर्जना गर्नुहोस् र बेच्न मार्केटिंग रणनीति बनाउनुहोस्।
WordPress WooCommerce विपरीत, यो छ एक मासिक लागत २ and र २ 29। डलर बिच फरक पर्दछ।
तपाइँको वेबसाइट निर्माण गर्न अर्को महान साइट, यद्यपि प्रयोग गर्न यति सजिलो छैन अब सम्म उल्लेख गरीएको छ। त्यो हो सबै भन्दा राम्रो डिजाइन संग र प्रयोगकर्तालाई उपलब्ध उच्च गुणवत्ता टेम्पलेट्स प्रदान गर्दछ। योसँग हाम्रो पहिलो वेब पृष्ठसँग सम्बोधन गर्ने सुविधाहरूको राम्रो भण्डार पनि छ।
स्क्वायरस्पेसमा हामी गर्न सक्दछौं यो Wix को साथ एक वेबसाइट सिर्जना गर्न कत्तिको सजिलो बीचको नail्ग र यो WordPress संग गर्न ठूलो कठिनाईको बीचमा। यो आधा बाटो हो कि अधिक समय र सीपको साथ प्रयोगकर्ताले एक महान वेबसाइट सिर्जना गर्न उसको मेहनत लिन्छ।
को योजनाहरु सस्तो छैन, तर किनभने ती उत्कृष्ट टेम्पलेट्स प्रस्ताव गर्दछ, यो बुझ्न सकिन्छ। यो मोबाइल उत्तरदायी हुनुको पनि विशेषता हो; त्यो हो, स्मार्टफोन र ट्याब्लेटको आकारमा अनुकूलित, आज केहि महत्त्वपूर्ण कुरा यदि तपाइँ एक वेबसाइट सेट अप गर्न चाहानुहुन्छ।
स्क्वायरस्पेस योजनाहरू पास एक महिनामा १२ देखि dollars० डलर सम्म। हामी दोहोर्याउँदछौं कि अरू विकल्पहरूले भनेजस्तै, यदि हामी हाम्रो वेबसाइटमा केहि विशिष्ट चाहान्छौं भने, स्क्वायरस्पेसले पनि यसलाई दिन सक्षम हुने छैन।
वर्डप्रेसको साथ हामी पूरै सीएमएसमा सर्छौं जुन यदि हामीले ड्रपलको छेउमा राख्यौं जुन एउटा सिक्ने वक्र धेरै ढिलो छ र PHP प्रोग्रामिंगमा प्रवेश गर्नु आवश्यक छ (यद्यपि आवश्यक नभए पनि), यो सजिलो छ। WordPress को बारेमा सबै भन्दा राम्रो कुरा यो हो कि तपाईं सक्नुहुन्छ सजीलो जानुहोस्, एक निःशुल्क गुणवत्ता विषयवस्तु स्थापना गर्नुहोस्, होस्टिंग लिनुहोस् र केही घण्टामा तपाईंसँग एक अद्भुत गुणवत्ता वेबसाइट हुनेछ।
वा, तपाईं कडा जानुहुन्छ, सफा बेस विषयवस्तु लिनुहोस् र ब्लगि blog, ईकमर्स वा कुनै पनि प्रकारको वेबसाइटमा समर्पित तपाईंको वेबसाइट सिर्जना गर्न प्रोग्रामिंग सुरू गर्नुहोस्, जुन पछि WordPress सम्भावनाहरू आज अन्त्य छन्। तपाईं आश्चर्यचकित हुन सक्नुहुनेछ किन तपाईं वर्डप्रेसको साथ आफ्नो साइट प्रोग्राम छनौट गर्न सक्नुहुनेछ, र यो केवल एसईओ थिमको कारणले हो, किन एउटा कारण छ कि किन धेरैले छनौट गर्नुपर्दछ र वर्डप्रेस कसरी प्रयोग गर्ने सिक्नुहुन्छ।
र के यो वर्डप्रेस हो, यसको महान र विशाल समुदायलाई धन्यवाद, र यसको थिमहरू र प्लगइनहरू मार्फत, द्रुत रूपमा बढ्न मा सक्षम छ हालका वर्षहरूमा। यदि तपाईं वर्डप्रेस को दुनिया मा आफैलाई डुबाउन चाहानुहुन्छ भने, हामी एक थीम र ड्र्याग एण्ड ड्रप पृष्ठ बिल्डरलाई सिफारिस गर्दछौं।
ओसनवाप- यसले १ लाख स्थापनाहरू पार गरिसकेको छ र हाल उत्तम वर्डप्रेस विषयवस्तु हो। मोबाईलहरूको लागि उत्तरदायी, वुकोमर्स (मूल कुराको साथ अनलाइन बिक्री प्लेटफर्म) को साथ प्रयोग गर्नका लागि सही र दुबै कोडमा सफा गर्नुहोस् र सम्भाव्यतामा यसले विकासकर्ताको आफ्नै प्लगइनहरू र विस्तारहरूको माध्यमबाट यसको विशेषताहरू बढाउनु पर्दछ।
Elementor: WordPress को लागि सबै भन्दा राम्रो वर्तमान लेआउट हो। ओसनवापसँग संयोजनको रूपमा तिनीहरू सबै स्तरमा उत्कृष्ट गुणस्तरीय वेबसाइटहरू सिर्जना गर्न एक जोडी बनाउँछन्। त्यो हो, दुबै वेब लोड गर्ने गति, विभिन्न प्रकार्यहरू, SEO मा अनुकूलित र विभिन्न तत्वहरूमा जटिलको लागि अनुकूलित। हामीले भन्न छ कि तपाईं प्रो एलिमेन्टर संस्करण प्राप्त गरेर यसको राम्रो प्राप्त गर्नुहुन्छ, विशेष गरी सबै प्रकारका वेबसाइटहरू सिर्जना गर्ने विजेटहरूको विभिन्न प्रकारका कारण।
अन्य मुद्दाहरूलाई विचार गर्न र जुन वर्तमानमा सबै भन्दा राम्रो हो तिनीहरू जनरेटप्रेस र एस्ट्रा थिम हुन् तिनीहरू ओसनवापको तहमा छन्। जे भए पनि, हामीले खोजिरहेको समाधानको लागि कुनले हामीलाई उपयुक्त ठानेको हेर्न को लागी एक वा अर्को प्रयास गर्नु हो।
WordPress प्रस्तावहरू सबै प्रकारका कार्यहरूको लागि प्लगइनहरूको एक विस्तृत श्रृंखला जस्तै तपाईंको साइटको सुरक्षा, ब्याकअप र अर्को वेबसाइटमा तपाईंको वेबसाइटको माइग्रेसन वा ब्याकअपको रूपमा यसको प्रतिलिपि, डिलर पृष्ठहरू सिर्जना गर्न डाईनामिक सामग्री र हामीलाई डेस्कटपलाई अनुकूलित गर्न अनुमति दिन्छ ता कि हामी यो चाहन्छौं जुन हामी चाहन्छौं।
केहि सबैभन्दा प्रसिद्ध WordPress प्लगइनहरूको ती हुन् र तीनिहरूले तपाईंलाई गतिशील सामग्रीको साथ वेबसाइटहरू सिर्जना गर्न अनुमति दिन्छ।
उन्नत कस्टम फिल्डहरू: तपाईंलाई गतिशील क्षेत्रहरू सिर्जना गर्न अनुमति दिन्छ जुन कुनै पनि प्रकारको उत्पादनहरूका लागि सबै प्रकारका पृष्ठहरू सिर्जना गर्न। एलेमेन्टरको साथ संयोजनको रूपमा यो केवल भयावह छ।
Yoast एसईओ: हाम्रो वेबसाइटलाई पूर्ण अनुकूलित स्थितिमा राख्नको लागि प्लगइन बराबर उत्कृष्टताको एउटा। यसले तपाईंलाई साइटम्यापहरू सिर्जना गर्न पनि अनुमति दिन्छ ताकि गुगल क्रलरहरू हाम्रो वेबसाइटको राम्रो तरीकाले निरीक्षण गर्न सक्दछन्।
वूकोमर्स: उत्तम प्रणाली तपाईंको ecommerce सिर्जना गर्न र हामीसँग हाम्रो अनलाइन स्टोर हुनु आवश्यक भएको सबै चीजको साथ विशेषता रहेको। वर्डप्रेसमा अवस्थित महान समुदायलाई धन्यवाद छ, त्यहाँ धेरै अन्य प्लगइनहरू छन् जसले यसको विशेषताहरू विस्तार गर्दछ।
सबै एक WP माईग्रेसनमा: सम्पूर्ण वेबसाइटहरू सार्नका लागि उत्तम उपकरण र मात्र केसमा जगेडा सिर्जना गर्न।
GDPR कुकी सहमति: नयाँ यूरोपीय डाटा सुरक्षा कानून को बारे मा सबै चीज मा अप टु डेट राख्न।
WP रकेट: उत्तम प्लगइन (यद्यपि भुक्तानी गरिएको छ) तपाईंको वेबसाइटको लोडि optim अनुकूलित गर्न, सबै स्वचालित रूपमा।
अन्तमा तपाईं पनि बताउनुहोस् तपाईं WordPress को वेब संस्करण प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ कि, यो धेरै सीमित छ, यो पनि धेरै संभावना प्रदान गर्दछ; ब्लगर जस्तै, किनकि यसले दिनुहुने समाधानमा धेरै समानताहरू छन् र केही मिनेटमा यसले हामीलाई ब्लग प्राप्त गर्न अनुमति दिन्छ।
Drupal अर्को CMS हो, तर हामीले भनेका छौ, सिकाई कर्भले तपाईंलाई अधिक लिने छ। त्यो बाहेक प्रोग्रामिंग ज्ञान आवश्यक छयद्यपि यो सत्य हो कि आधारभूत वेबसाइटहरू सुरूवात गर्न हामी प्रोग्रामिंगमा जानु बिना मोड्युलहरू तान्न सक्छौं। जे भए पक्कै पनि, केहि वेबसाइटहरूको स्तरमा पुग्न जुन हामीले स्क्वायरस्पेसका साथ गर्छौं, हामीले कडा परिश्रम गर्नुपर्दछ र CSS को ज्ञान हुनुपर्दछ।
Drupal सीएमएस कम्पनीहरू द्वारा प्रयोग गरीन्छ जसमा उनीहरूसँग प्रोग्रामरहरू छन् र सत्य यो हो कि त्यो स्तर पुग्दा कुनै पनि वेब पृष्ठ मनमा आउँदछ। यो वर्डप्रेस जस्तै नि: शुल्क सीएमएस हो र यो यसको मोड्युलर उपस्थितिबाट पनि चिनिन्छ, यद्यपि भनिएको कुरा सब भन्दा जटिल हो।
यो छ नासा वेबसाइटहरू र अन्य स्थानहरू जस्तै क्यासाब्लान्का। यद्यपि उनीहरूले अन्तत: वर्डप्रेसको साथ नयाँ वेबसाइट सुरू गरे पनि; विकास सामान।
० बाट वेब सिर्जना गर्नुहोस्
निस्सन्देह, प्रयास विचारशील हुनेछ, साथ साथै ती भाषाहरू कसरी ह्याण्डल गर्ने भन्ने जान्ने समय हो। यदि हामी सफल भयौं भने हामी वेबसाइटहरू छनौट गर्न सक्दछौं जुन डरलाग्दो हुनेछ र त्यो उत्तम अनुकूलित हुनेछ। हामी पनि हामी वेब विकास पेशेवरको रूपमा जीवन निर्माण गर्न सक्दछौं र त्यो हो, तिनीहरू सस्तो कुनै पनि शुल्क लिन सक्दैनन्। हामी सुझाव दिन्छौं कि तपाईले स्ट्याक डेभलपरको अर्थ के हो भनेर हेर्नुहोला।
अन्तिम आश्चर्य: Github को साथ तपाइँको वेबसाइट सिर्जना गर्नुहोस्
Github, सहयोगी विकासको लागि प्लेटफर्म बराबर उत्कृष्टता बाहेक Git संस्करण नियन्त्रण प्रणाली प्रयोग गरेर तपाईंलाई एक प्रोजेक्ट होस्ट गर्न अनुमति दिएर, यसले तपाईंलाई कुनै पनि मूल्य बिना तपाईंको आफ्नै वेबसाइट होस्ट गर्न अनुमति दिन्छ।
को लागि Github प्रयोग को ठूलो लाभ तपाइँको वेबसाइट सुरूवात शून्य लागत होतपाईले एउटा स्थिर HTML वेबसाइट सिर्जना गर्नुपर्नेछ। सबै भन्दा राम्रो यो हो कि तपाईंसँग एक डेस्कटप अनुप्रयोग छ जसको साथ तपाईं आधारभूत वेबसाइट पाउन HTML को साथ आफ्नो पहिलो कदम चाल्न सक्नुहुन्छ। र यो पनि गाह्रो छैन!
हामीले गर्नु पर्छ GitHub डेस्कटप अनुप्रयोग स्थापना गर्नुहोस् म्याकोस वा विन्डोजका लागि नयाँ प्रोजेक्ट सिर्जना गर्नुहोस्, वेबको लागि आधारभूत फाइलहरूको प्रतिलिपि गर्नुहोस् र यसलाई प्रकाशित गर्नुहोस्। र यदि हामी यसलाई कढ़ाई गर्न चाहन्छौं भने, हामी होस्टिंगमा डोमेन प्राप्त गर्न सक्दछौं (ती एक वर्षमा १०-१२ युरो भन्दा बढी हुँदैन) र सबैभन्दा कम लागतमा त्यो वेबसाइटमा पुनःनिर्देशित गर्न सक्दछौं।
हामी यसलाई सिफारिस गर्दछौं तपाईं तिनीहरू मध्ये जो HTML मा कोड गर्न सुरू गर्दै र त्यसैले तपाईं बिस्तारै आफ्नै साइट सिर्जना गर्न जानुहुन्छ। यो राम्रो चीज हो जुन यो सित्तैंमा छ। र तपाईं आश्चर्यचकित हुनुहुनेछ कि गिथुबको साथ वेबसाइट प्रकाशन गर्ने यस तरिकामा के गर्न सकिन्छ।
Y यस तरीकाले हामीले हाम्रो हातमा भएका विभिन्न विकल्पहरूको समीक्षा समाप्त गर्छौं एक वेबसाइट बनाउन र नेटवर्क को नेटवर्क मा शुरू गर्न। सबै हालका विकल्पहरूको वर्डप्रेस धेरै कारणका लागि बाहिर जान्छ। यसको ठूलो समुदाय, हजारौं प्लगइनहरू, उच्च गुणवत्ता निःशुल्क र सशुल्क थिमहरू र विषयवस्तुको आधारमा प्रोग्रामिंग सुरु गर्न कत्ति सजिलो छ।
अवश्य पनि, यदि तपाईं समय बर्बाद गर्न चाहनुहुन्न र आधारभूत वेबसाइट वा ईकमर्स सुरू गर्नुहोस् धेरै व्यापक उत्पादनहरूको संख्याको साथ तपाईसँग विकल्पहरू छन् जुन धेरै चीजहरूलाई सजिलो बनाउँदछ। अब यो गर्न इच्छा मात्र छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » वेब डिजाइन » WordPress » मसँग वेब पृष्ठ सिर्जना गर्न विकल्पहरू के छन्
एक पेशेवर वेबसाइट को लागी WordPress? ????????
प्रिटेन्सनको साथ ब्लग भन्दा अलि फरक वेबसाइटको सिर्जनाको लागि, न्यूनतम ड्रपल वा जुमला हो। बिना डरा, विवाद बिना, अत्यधिक खपत बिना, हजारौं बिक्री गुरु बिना पछाडि…।
राम्रो सोचाइ गरिएको सबै लचकताका साथ, राम्रोसँग डिजाइन गरिएको सीएमएस शक्तिशाली र सॉल्भन्ट कोरहरूको साथ जुन अज्ञात आमा बुबाबाट प्लगइन प्लगइन वरिपरि जानु हुँदैन।
कृपया मानिसहरूलाई मूर्ख नबनाउनुहोस्। WordPress एक-तालिका ब्लग हो; त्यो उहाँको महान सद्गुण र उहाँको विशाल Achilles हील हो। यो दूर होईन, कपटपूर्ण वेबसाइट वा अनलाइन स्टोरहरू सिर्जना गर्नका लागि एक विलायक CMS होईन। जुन हजारौं इन्डोलेन्ट एजेन्सी कार्टुनिस्टहरू जुमला, ड्रुपल, प्रेस्टशप वा ईई (उदाहरणका लागि) का लागि सरल म्यानुअल कसरी सिक्ने भनेर जान्दैनन् वा जान्दैनन् उनीहरूले प्रयोग गर्ने उपकरणहरू भन्दा उनीहरूका बारेमा बढी भन्छन्।
अवश्य पनि, यदि तपाइँले वेबसाइटहरू केहि बटनहरू र रंगहरूको साथ तपाइँको ग्राहकलाई चकित पार्न केहि बढीको रूपमा बुझ्नुभयो भने।
यस विन्दुमा यो वास्तवमै शंका गरिएको छ कि WordPress द्वारा तपाईं व्यावसायिक वेब पृष्ठहरू बनाउन सक्नुहुन्न?
म बुझ्छु कि Drupal को साथ तपाईं पूर्ण रूपले अनुकूलित वेबसाइट सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ वर्डप्रेस प्लगइनहरूको लोड बिना, तर धेरै प्रयोगकर्ताहरूको लागि जो PHP मार्फत जान चाहँदैनन् र जससँग उच्च स्तरको प्रोग्रामिंग ज्ञान छैन, वर्डप्रेस पूर्ण भन्दा बढी हो समाधान
वास्तवमा WordPress अब प्रकाशित वेबसाइटहरूको of 34% र CMS को of०% भन्दा बढीमा छ। र Drupal? के यो सबै वेबसाइटहरूको १.%% मा रहन्छ? (को डाटा W3Techs)
कि म तपाईंसँगै छु कि एक समर्पित र अनुकूलित वेबसाइट Drupal को लागी, तर अन्य धेरै समाधानहरू, ecommerce, ब्लगहरू, अवतरण पृष्ठहरू र अधिकको लागि, WordPress सफल समाधान भन्दा बढि हो।
स्ल्याकले यसको सार बिर्सनु हुन्न नयाँ लोगो रंगमा सुरू गर्दछ
Wacom Cintiq प्रो 13 र 16 अब HDMI जडान समर्थन गर्दछ